Israel iyo Isutagga Imaaraatka Carabta ayaa gaadhay heshiis Yaab Leh Oo uu Waday Maraykanku ( Akhriso Warbixintan) | Dhexnimo Media
Home Wararka Israel iyo Isutagga Imaaraatka Carabta ayaa gaadhay heshiis Yaab Leh Oo uu...
Israel iyo Isutagga Imaaraatka Carabta ayaa gaadhay heshiis Yaab Leh Oo uu Waday Maraykanku ( Akhriso Warbixintan)
Qoraal ay si wada jir ah u soo saareen, Israa’iil, Imaaraatka iyo Mareykanka waxay ku sheegeen in Raiisel wasaare Benjamin Netanyahu, Mohammed bin Zayed iyo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump “ay ku heshiiyeen in si buuxda loo xoojiyo xidhiidha u dhexeeya Israa’iil iyo Imaaraadka”.
Isbadalkan diblomaasiyadeed ee wuxuu hormarinayaa nabada gobolka Bariga Dhexe waxanay marag u tahay geesinimada diblomaasiyadeed iyo aragtida saddexda hoggaamiye iyo geesinimada Imaaraadku iyo Israa’iil ay ku qaabeeyaan waddo cusub oo daah furi doonta awoodda weyn ee ka dhex aloosan. gobolka, ”ayaa lagu yidhi bayaanka.
Netanyahu wuxuu sheegay in ku dhawaaqay doono caawa bayaan telefishan 8:30 fiidnimo wakhtiga Qudus.
Hanan Ashrawi, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Maamulka Falastiin, ayaa sheegay in Israel lagu abaalmariyay falalkii ay ka gaysatay dhulalka reer Falastiin tan iyo 1967.
“Imaaraadku wuxuu si cad ugu soo baxay heshiiskiisa qarsoodiga / sharci ahaaneed ee uu la leeyahay Israel. ayay ku soo qortay boggeeda.
Imaaraadku waxa uu noqonayaa waddankii saddexaad ee Carab ah oo heshiis nabadeed la gaadho Israa’iil, ka dib Jordan iyo Masar 1994 iyo 1979 siday u kala horreeyaan. Heshiiska waxaa lagu magacaabaa “Abraham Accords”.
Wufuudda Israel iyo Emirati ayaa lagu wadaa inay kulmaan maalmaha soo socda si ay u saxiixaan heshiisyo laba geesood ah oo ku saabsan maalgashiga, dalxiiska, duulimaadyada tooska ah, amniga, isgaadhsiinta iyo qodobo kale, ayaa lagu yirldhi qoraalka.
Labada dal ayaa sidoo kale lagu wadaa inay isdhaafsadaan danjirayaasha iyo safaaradaha.
Mohammed bin Zayed, amiirka Abu Dhabi, ayaa soo dhigay bartiisa Twitter-ka: hadal sidan u dhigna
“Intii lagu guda jiray wada hadaladii u dhaxeeyey madaxweyne Trump iyo Raiisul wasaare Netanyahu waxaa la gaadhay heshiis ah in la joojiyo dib u qabsashada Israel ee dhulalka reer Falastiin.
“Imaaraadku iyo Israa’iil waxay kaloo ku heshiiyeen iskaashi iyo dejinta qorshe-hawleed lagu aasaasayo xidhiidh laba geesood ah,”ayuu raaciyay qoraalkiisa
Previous articleMadaxwene Trump oo cabasho dad badan layaabeen gudbiyay iyo Jawaab laga bixiyay !!
Next articleFarmaajo oo Madaxda 3 dowlad goboleed oo kulan xasaasi ah ku yeeshay Dhuusamareeb